Haasi Munhu wese Anogona Kuona Yako Webhusaiti | Martech Zone
Haasi Munhu wese Anogona Kuona Yako Webhusaiti
China, April 25, 2019 China, April 25, 2019 Virginia Jacko
Kune mamaneja ewebsite kumabhizinesi mazhinji, makuru uye madiki, mwaka uno wapfuura yaive nguva yechando yekusagutsikana kwavo. Kutanga muna Zvita, gumi nemaviri e dzimba dzemifananidzo muNew York City dzakatumidzwa mumatare, uye maberere akanga asiri oga. Mazana mazhinji emasutu akaiswa nguva pfupi yadarika kumabhizimusi, masangano etsika, mapoka ekutsigira uye kunyangwe chiitiko cheap webhusaiti yakatumidzwa mukirasi-yekuita sutu yakaiswa muna Ndira.
Kushupika kwavakafanana? Aya mawebhusaiti anga asingawanikwe kune mapofu kana kutadza kuona. Mhosva dzakazoguma dzakaiswa nevanomhan'arira kumanikidza mabhizinesi kuunza mawebhusaiti avo mukati kutevedza nemaAmerican anehurema Mutemo, nokudaro zvichivaita kuti vasvike kune mapofu uye vakaona.
Kana iwe ukabata webhusaiti sechikamu chebasa resangano rako, mubvunzo waunofanirwa kunge uchibvunza ndewokuti:
Webhusaiti yangu inosvikika zvizere here?
Uri Kuvhara Vangangodaro Vatengi?
Mapofu uye vakaona sevanhu vakaita seni vanowanzo dimburwa - zvisinei vasingadi - kubva pachikamu chakakura chehupenyu chaungangotora sezvisina basa. Kunetsekana nezvevadzidzi vasina kuona kuvharirwa kunze kwekudzidza pamhepo zvakandimanikidza kunyora chinyorwa pamusoro pekudikanwa kwekugadzirwa kwepasirese kwaMay 8th 2011 magazini ye Nyanzvi yeZvesimiridzo, chidimbu chakagadzirirwa kukwidziridza ruzivo pakati pevadzidzisi nemapoka avo eIT.
Kune mapofu, izvo zvinoda kuwana webhusaiti - uye iyo ADA kutevedzera izvo zvinogona kuzvisimbisa - zvinowedzera munzvimbo dzese, kubva padzidzo kusvika kumabhizinesi, masevhisi, masangano etsika uye mamwe masangano. Kana iwe uine kuona, funga nezve kuti unotsamira sei paInternet iwe uri pabasa rako rezuva nezuva uye hupenyu hwepamba. Mangani mawebhusaiti aunoshanyira mune zvakajairika zuva? Fungidzira kuti zvingave zvakaita sei kana iwe usingakwanise kuwana iwo masosi, uye rinenge zuva rega rega, iwe unosangana nezvinhu zvinoverengeka zvausingakwanise kuita.
Kunyangwe mutemo, wakaringana uye wakaenzana webhu kuwana kwave kunetsekana. Kuvharirwa kunze, kunyimwa mukana wekuwana mawebhusaiti pane izvo zvakanyanya zvekutengeserana, bhizinesi, uye nehupenyu pachahwo zvinoenderana nenyika yedu nhasi, zvinogona kukurudzira vapomeri mapofu kuti vaende kumatare. Kana vamhan'ari vakapa file sutu, vanodaro vachidudza iyo ADA. Iwe unogona kuyeuka iyo ADA semutemo unobatsira iyo wheelchair-yakasungwa kuwana mukana kune zvivakwa zveveruzhinji, asi handizvo chete zviripo kune izvo.
MaAmerican anehurema Mutemo (ADA) unoziva kuti vanhu vane zvose hurema hune kodzero yekuwana mukana, kusanganisira mapofu uye vasina kuona, uye izvi zvinoreva kuwana kune midhiya nepamhepo midhiya kuwedzera kune epanyama nzvimbo. Zviri pamwoyo wenyaya mune mafashama azvino eADA masutu.
Vanhu vakapofumara uye vasina kuona vanoshandisa muverengi kutibatsira kufamba uye kushandisa mawebhusaiti. Vaverengi vanojekesa zviri pahwindo uye nekuverenga nemagetsi zvinonzwika, zvichiita kuti tikwanise kuwana izvo zvatisingone. Iyo tekinoroji iyo inoyera nhandare yekutamba.
Asi, isu takavharirwa kunze kana tatarisana nemawebhusaiti asina kunyoreswa kuti tifambiswe nesu. Kana iwe uri kuyedza kutenga zvigadzirwa, bhuku kamuri yehotera kana kuwana yako webhusaiti yechiremba uye saiti haina kugadzirirwa kuwana, wapedza. Fungidzira uchiedza kuita kuti basa rako riitwe usingakwanise kuverenga iyo skrini; ndizvo zvinotarisana nemushandi asingaoni uye asingaone zvakanaka zuva nezuva.
Dzivirira Saiti Yako Kubva Kuve Achilles Chitsitsinho
Kune bhizimusi hombe, inofamba ichienda kune yekugadzirisa iri nyore. Ivo vane zviwanikwa uye kutevedzera, zviri pamutemo uye vashandi veIT kuti vakurumidze kuunza mawebhusaiti avo kuenderana nezvinodiwa neADA. Ivo vanogona kugadzirisazve maficha uye zvakare kunyora-nyora kodhi nekukurumidza kuti vagamuchire izvo zvinodikanwa zvevapofu vashanyi, vachipa mukana wekuwana uye zvichinyanya kupa kupa kwekugamuchira.
Asi, mabhizimusi madiki nepakati nepakati nemasangano zvinowanzo svinudzwa zviwanikwa. Mukubvunzurudzwa kwenhau, varidzi vemabhizimusi vadiki nepakati avo vakadaidzwa mumasutu eADA vanoti vanonzwa kunetseka.
Izvi zvinogona kugadziriswa nyore nyore kune wese munhu kubatsirwa. Kutaurirana nemapoka ekukurudzira mapofu nevasingaone zvakanaka kunogona kutanga kukuru kumasangano aya, uye kune huwandu hwenongedzo dzekuchengeta mundangariro pavanotanga nzira yekuzadzisa ADA kutevedzera mawebhusaiti avo.
Zvaunogona Kuita Kuti Uve nechokwadi chekuti Webhusaiti Yako Inowanikwa
Chii chaunogona kuita kana iwe uine bhizinesi uye uchida kudzivirira kumanikidzwa kutevedzera panotongwa sutu yehurumende? Kuenda kumberi kwedambudziko kunodhura uye ndiko kufamba kwakangwara:
Shanda nemutevedzeri wako wekuteerera kana nyanzvi kuona kuti mawebhusaiti ako anoenderana zvizere ADA mirau uye iyo inozivikanwa pasi rese WCAG 2.0 / 2.1 webhusaiti yekuwanika standard;
Tsvaga rairo kubva kumapoka ekutsigira mapofu kana vakaona, sesu. Ivo vanogona kupa webhusaiti kubvunza, odhita, uye kuwana kune maturusi anogona kukuchengetedza iwe mukuteerera;
Kurudzira makodhi ako uye vanogadzira zvemukati kuvandudza webhusaiti yako ne:
Label mabhatani, zvinongedzo uye mifananidzo ine zvinyorwa zvemavara, inozivikanwa se alt tags;
Gadzirisa magadzirirwo kuitira kuti kumberi uye kumashure mavara ave zvakakwana kusiyana;
Ita shuwa kuti webhusaiti yako inogona kufamba nyore uchishandisa keyboard chinongedzo.
shandisa kudzidziswa kwemahara uye online zviwanikwa zvekugara pamusoro pemutemo.
Shandira pamwe nemamwe masangano nemabhizinesi, muchivimbisana kuita kuti mawebhusaiti enyu asvike kune vasina kuona neyakafa nguva yamunoisa pamwechete.
Izvi zviito zvinobatsira masangano nenzira dzakawanda: nekuve wakabatanidzwa, unokoka vatengi vazhinji nevatsigiri mukati mewebsite yako - musuwo wepamberi wesangano rako. Nokutungamira, iwe unovandudza maonero eruzhinji; kukosha kwako kunowedzera kana iwe ukagadzira mikana yakawanda yekuwana. Ndicho chikonzero iyo Miami Lighthouse yeMapofu uye Asingaone Vakaona aive mumwe wekutanga kupa mabhizinesi nemakambani munyika yose webhusaiti kubvunza kuve nechokwadi chekuteerera neADA.
Pakupedzisira, izvi ndezve kuita zvakanaka. Nekuwedzera kuwana, iwe uri kutevedzera mutemo uye nekuona kuti vanhu - zvisinei nemano avo - vanopihwa mukana wakaenzana sewemumwe munhu wese. Hazvina kunaka chete, zvakajairika muAmerica, uye mabhizinesi edu, tsika tsika uye kunyange nyeredzi hombe saBeyoncé vanofanirwa kurangarira izvo. Kubatanidzwa hakungori a kugona chinhu - ndicho rudyi chinhu.
Tags: Adavanhu vemuAmerica vakaremara vanoitamapofumhosvakutadza kuona
Virginia Jacko ndiye Mutungamiri uye CEO weMiami Lighthouse yeVapofu uye Vanotadza Kuona izvo zvinoshandura gore rega hupenyu hwevanhu vanopfuura 75,000 nekuvaratidza kuti zvinoita sei kuona vasina kuona.
Uri Sei Kushambadzira Yako Brand Kugara nekusiyana?
Tsvaga iyo Center yeGiravhiti yeGreat Mharidzo Dhizaini